October 20, 2021 Warar & Muuqaal 0
(Sawir: Machadka Barashada Afgaanistaan ​​/ Abuuritaanka Rajo Caalami)
"Waa halka ay dadka Afgaanistaan ​​joogaan"
Sannado badan ka hor, markii barayaasha da'da yar ay qaadanayeen fursado waaweyn si ay u beddelaan qaab -dhismeedka dugsiga iyo manhajyada si ay ula jaanqaadaan xaqiiqooyinka adduunka iyo nolosha dhallinta, barayaal badan ayaa iska daayay dugsiyada si ay u raadsadaan siyaabo kale oo wax loo baro. Markii aan weydiiyay macallin aad u go'an oo aad uga xumaaday "nidaamka" sababta uu u sii wato inuu wax ka dhigo iskuulka dadweynaha, jawaabtiisu toos bay u ahayd oo waxay u sheegtay. Wuxuu ku jawaabay, "Sababtoo ah waa meesha ay carruurtu joogaan." Muujinta waxa maankayga ku jira ayaa ah qodobka ugu muhimsan ee ka go'an ujeedo, daryeel iyo walaac dadka ku lug leh.
Barayaasha nabada ee yaqaana dembiyada iyo xaaladaha Medea Benjamin iyo Ariel Gold dulmar ku xusan bayaanka hoos ku dhejiyay waxay is weydiin doonaan su'aal la mid ah. Iyadoo ay jiraan duruufahaas, maxaa loola tacaali karaa Daalibaan? Jawaabta waxaa naloo siinayaa doodda si fiican u qeexan ee daba socota wicitaan hore loo soo diray mushaar siiyaan macalimiinta Afgaanistaan ​​iyo shaqaalaha caafimaadka waa mid cad oo dhab ah sida uu ku hadlay macallinkaas, "Sababtoo ah waa meesha ay dadka Afgaanistaan ​​joogaan." Noloshooda hadda waa - waxaan ku tukanaynin waqti dheer - oo ay gacanta ku hayaan Talibanka arxan darada ah. Kuwa naga mid ah ee daryeela noloshooda, ku noolaanshaha sii noolaanshaha fursadaha mustaqbalka wanaagsan ee dalka, waxay sidoo kale raadin doonaan qaabab ay ula falgalaan Taalibaan taas oo suurtogal ka dhigaysa badbaadada iyada oo laga hortagayo xadgudub kale, iyo laga yaabee in la helo habab lagu yareeyo xuquuqda aadanaha xadgudubyada aan sida aadka ah uga warqabno.
Sidii hore oo kale, waxaan ku boorinaynaa barayaasha nabadda inay gaaraan dhammaan go'aan-qaatayaasha ku habboon, iyagoo ku boorrinaya inay sameeyaan wax walba oo karaankooda ah si looga hortago masiibo bani'aadamnimo oo hor leh, inay u soo dhawaadaan Taalibaan si ay uga dhaadhiciyaan inay qaadaan tillaabooyin ku aaddan samaqabka dadka reer Afgaanistaan. (BAR, 10/19/2021)
Gaajada Taliban - mise dadka Afgaanistaan?
By Medea Benjamin iyo Ariel Gold
(Waxaa daabacay: Shaqaale Dawladeed oo Mas'uul ah. Oktoobar 18, 2021)
Bishii hore, Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF waxay ansixisay $650 bilyan oo taariikhi ah qoondaynta Xuquuqda Sawirka Gaarka ah si ay u caawiyaan boodada-bilawga nidaamka dhaqaalaha caalamiga ah ee uu waxyeeleeyay COVID. IMF waxay u qoondeysay $ 450 milyan oo tan Afgaanistaan, oo ah waddan dhaqaalihiisu burburayo aadna ugu baahan faleebo.
Laakiin Arkansas Republican French Hill waxay isku xireen 17 ka mid ah saaxiibbadiisii ​​Jamhuuriga si ay qalin ugu qaataan warqad Xoghayaha Maaliyadda Janet Yellen oo ku boorinaysa inay soo farageliso IMF si "loo hubiyo inaan SDR-yada loo qoondeeyay la siin Afgaanistaan ​​​​hoggaaminayo Taliban." IMF si degdeg ah u hoggaansamay.
Tani waxay qayb ka tahay dadaal weyn oo lagu doonayo in lagu gaajeeyo Daalibaan dhaqaalihii. Markii Mareykanku ka baxay Afghanistan dhammaadkii bishii Agoosto, waxay ahayd barafoobay $ 9.5 bilyan oo ka mid ah hantida Bangiga Dhexe ee Afgaanistaan. Bangiga Adduunka joojisey Bixinta lacagta iyada oo loo marayo Sanduuqa Aas -aasidda Dib -u -dhiska Afghanistan. Marka la eego in gargaarka shisheeye ee Afgaanistaan ​​​​uu hore u ahaa qiyaastii $8.5 bilyan sannadkii - ku dhawaad ​​kala bar wax soo saarka guud ee dalka - saameynta qaboojinta lacagahan ayaa ahayd masiibo.
Si loo caddeeyo, waxaa jira dood wanaagsan oo ku saabsan wada-shaqeyn la’aanta Taliban. Kooxda Taliban ayaa tan iyo markii ay xukunka la wareegtay waxay sheegtay inay u oggolaan doonto gabdhaha inay iskuul dhigtaan. Waxay ka dhabeeyeen balanqaadkoodii ilaa dugsiyada hoose, laakiin inta badan dalka, gabdhaha waxaa laga ilaaliyaa fasalada 7-12. Dumarka badankood ee ka diiwaangashan jaamacadaha dawladda ayaan tegin fasallada cabsi, fasallo la baajiyay, ama xannibaadaha Taliban. In kasta oo afhayeennada Taliban ay ku adkaysanayaan in haweenku ay sii shaqayn karaan, haddana waxaa jira warbixinno joogto ah oo sheegaya in dagaalyahannada Taliban ay ku amraan haweenka baxo goobahooda shaqo, oo loo diiday xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee guryahooda ka baxsan, oo lagu soo rogay xeerar labbis oo khasab ah, oo aan loo oggolaan inay si nabad ah u mudaaharaadaan.
Sida laga soo xigtay Amnesty International, Xubnaha Taalibaan waxay silciyaan saxafiyiinta waxayna halis galiyeen badbaadada difaacayaasha xuquuqda aadanaha. 30 -kii Agoosto, ciidamada Taliban dilay 13 qowmiyadood oo Hazaras ah. 17 ka mid ah ayaa la sheegay inay ahaayeen askartii hore ee dowladda ee isa soo dhiibayay, labada kale oo ay ku jirto gabar XNUMX jir ah ayaa ahaa dad rayid ah oo isku dayayay inay goobta ka cararaan markii Taliban ay rasaas fureen.
In kasta oo ay tahay in aan dhammaanteen ka cadhayno xadgudubyada iyo xuquuda xuquqda ay Afgaanistaan ​​la kulmayaan, kaydinta lacagaha Afqaanistaan ​​ayaa dhibanayaal u ah dhibanayaasha. Waxay cunnada ka soo saaraysaa afka carruurta. Waxay halis gelinaysaa malaayiin nafood.
Waqtigan xaadirka ah, dhaqaalihii qaranka iyo adeegyadii dadweynaha ayaa aad u xanaaqsan. Bangiyada ayaa lacag la’aan ka dhamaaday, shaqaalaha dowladda ayaan wax mushaar ah qaadan, waxaana sare u kacay qiimaha raashinka. Ha ku degto: Barnaamijka Cuntada Adduunka (WFP) qiyaasta in boqolkiiba 93 dadka Afgaanistaan ​​​​aysan helin cunto ku filan oo ay cunaan.
Dugsiyadu ma haystaan ​​wax lacag ah. Waxaa jira Macallimiinta 220,000 Afgaanistaan, iyo tan iyo bishii Juun, intooda badan lama siin. 6-dii Oktoobar, Ururka Macallimiinta Afqaanistaan ​​oo ka kooban 45,000 ayaa soo saaray codsi deg-deg ah oo ay ugu baaqayaan in la fiiriyo xaaladdooda ba'an. “Wasaaradda Waxbarashadu waxay leedahay kheyraad aad u yar, wayna adag tahay in macallimiintayada la weydiiyo inay sii shaqeeyaan iyagoo aan haysan mushaar. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa ah kuwa kaliya ee ka masruufa qoysaskooda, runtiina waa ay la halgamayaan. Way adkaan doontaa in iskuuladu sii furnaadaan haddii aanan haysan wax lacag ah. ” Sideen ugu adkeysan karnaa in Taalibaan ay gabdhaha u furaan dhammaan iskuullada laakiin haddana diidaan inay bixiyaan macallimiinta?
Nidaamka daryeelka caafimaadka ee qaranku wuxuu qarka u saaran yahay burbur. Kaliya qiyaastii 15 boqolkiiba in ka badan 2,000 oo xarumo caafimaad oo dalka ah ayaa shaqeeya inta badan shaqaalaha shaqeeya ayaa sidaas sameeya ku salaysan iskaa wax u qabso. Haddii lacag aan loo sii dayn mushaharka iyo sahayda, tiro ka bax shaqaalaha daryeelka caafimaadku waa soo dhow yihiin. "Waxaa jirta halis ah in dadka reer Afgaanistaan ​​aysan gabi ahaanba heli doonin adeegyada caafimaadka aasaasiga ah," Agaasimaha UNDP ee Asia-Pacific Kanni Wignaraja ayaa sheegay in. Sanduuqa Horumarinta Qaramada Midoobay dhawaan ayaa lagu dhawaaqay in ay bilaabi doonto in mushaharka si toos ah loogu shubo akoonnada bangiyada kumanaan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ah, oo hareer mara dowladda dhexe. Inkastoo tani ay tahay horumar soo dhaweyn leh, kuma filna in dib loo soo nooleeyo dhammaan nidaamkii daryeelka caafimaadka ee qaranka.
Waxaa la mid ah gargaarka bani'aadamnimada; waa muhiim laakiin xal ma aha. 12 -kii Oktoobar, Midowga Yurub ku dhawaaqay xirmo gargaar $1.2 bilyan ah iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda Anthony Blinken ayaa sheegay in Maraykanku wuxuu bixin doonaa gargaar bani'aadamnimo oo dheeraad ah (inkastoo uu aad u yar yahay $ 64 million Ballanqaadku waa qiyaastii shan-meelood meel 300 milyan oo doolar maalintii uu Maraykanku ku kharash gareeyey 20kii sano ee uu shaqaynayey). Waxay noqon doontaa wax aan macquul aheyn in si wax ku ool ah loo qaybiyo gargaarkan inta bangiyada Afgaanistaan ​​ay weli ku jiraan cunaqabateynta Mareykanka iyo Qaramada Midoobay, awoodin in la galo doolar jirka ah.
Waxaan fahamsanahay walaacyada halista ah ee ku saabsan hababka lacag-bixinta, oo ay ku jiraan inaanan doonayn in la xoojiyo Taliban ama la fududeeyo nooca musuqmaasuqa ee ka jiray xukuumadihii hore. Ikhtiyaarrada ballan -qaadka ah ayaa waxaa tijaabinaya hay'adaha Qaramada Midoobay si toos ah loo siiyo shaqaalaha adeegga dadweynaha. Laakiin haddii nidaamka bangiyada iyo wasaaradaha muhiimka ahi ay shaqaynayaan, diidmada qayaxan ee wadashaqayn kasta oo lala yeesho Daalibaan waxay noqon doontaa mid aan waxtar lahayn.
Jiilaal adag ayaa soo dhow. Haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin, waxaa jiri doona gaajo, dhimasho, iyo waddan xasillooni darro ah oo u bislaaday dagaal sokeeye. Kooxaha argagixisada sida Al Qaacida iyo ISIS waxay heli doonaan dhul barwaaqo ah. Malaayiin reer Afgaanistaan ​​ah oo quus ah ayaa isku dayi doona inay dalka ka baxsadaan, iyaga oo u soo bandhigi doona kuwa wax tahriibiya, waxayna kicinayaan dib u soo cusboonaatay. daad ee qaxootiga dalalka deriska ah iyo Yurub oo la tartami kara dhibaatada qaxootiga Suuriya ee 2015. Hoggaamiyaha Jarmalka ee Angela Merkel ayaa sheegay Wariyeyaasha kulankii G20 ee ugu dambeeyay, “In la garab istaago oo la daawado 40 milyan oo qof oo ku dhex jira fowdo…
Ka dib 20 sano oo hawlgallo milatari ah oo aan ku lunsanay in ka badan $ 2 tiriliyan oo aan ku dilnay tobanaan kun oo reer Afgaanistaan ​​ah, Mareykanku waa inuusan ka aargoosan dadka reer Afgaanistaan ​​siyaasadaha taliyayaashooda dib -u -dhaca ah. Annaguna haddaan nahay reer galbeedka u dooda xuquuqul insaanka waa in aan aqoonsanno mudnaanta koowaad ee xaqa wax la cuno. Waa inaan la halgameynaa dhibaatooyinka maanta ka jira Afgaanistaan ​​oo aan noqonno kuwa u ololeeya sii -deynta lacagaha ay hadda hayaan bangiyada shisheeye iyo hay'adaha caalamiga ah, lacagahaas oo ay iska leeyihiin dadka Afgaanistaan.
Jaamacadaha Afgaanistaan ​​waxay dhiseen dhaqdhaqaaq ka dhan ah xagjirnimada
October 31, 2017 Warar & Muuqaal 0
Shan iyo toban sano kadib markii xukunka laga tuuray Talibaan, tirada ardayda dhigata jaamacadaha ee Afqaanistaan ​​ayaa codbixisay, ku dhowaad 50 jaamacadoodna waxay ka sameeyeen fagaara muhiim u ah halganka mustaqbalka dalka. Haddana jaamacadaha Afqaanistaan ​​ma lahayn koorsooyin ama ururada ardayda ee u heellan ka soo horjeedka fikradaha xag-jirnimada iyo dhisidda nabadda guud ahaan qowmiyadaha, diimaha iyo qeybaha kale ee ay ka faa'iideystaan ​​kooxaha xagjirka ah. [sii wad akhriska…]
Codsi ah in loo diro Afghanistan ciidamo nabad ilaalin ah si ay u sugaan amniga kuwa ugu nugul ugana caawiyaan soo celinta nidaamkii bulshada
July 13, 2021 Digniinta Waxqabadka, Warar & Muuqaal 1
Toddobaadyo ka hor, qaar badan ayaa saxeexay inay taageeraan warqadda 14-kii Maajo ee loo diray Madaxweyne Biden oo lagu weydiisanayo gargaar bani'aadamnimo iyo in la ilaaliyo haweenka iyo gabdhaha reer Afgaanistaan ​​ee nabadgelyadoodu khatar gelisay bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO. Hadda waxaan raadineynaa taageeradaada si aan u xoojino baaqa ah in la geeyo ciidan nabad ilaalin ah si ay u sugaan amniga kuwa nugul isla markaana u dhaqan geliyaan xabad joojinta si ay gacan uga geysato soo celinta kala dambeynta bulshada si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay oo xasilloon. [sii wad akhriska…]